Maqaallo | Xiiso Online Allxiiso Online Scroll to Top Xiiso Online Allxiiso Online
Shabakada Xiiso iyo Allxiiso Online
Category Archives: Maqaallo Nin 40-jeer shaqo loogu diiday Saddaam Xuseen awgiis (warbixin dad badan ka yaabisay) Nin u dhashay dalka Hindiya oo ah injireen badaha dhismayaashooda ah (Maritime Engineer), ayaa 40 jeer shaqo loogu diiday sabab la xidhiidha inuu la magac yahay hoggaamiyihii Ciraaq ee Saddam Xuseen.
Ninkan oo la yidhaahdo Saddam Xuseen waxa magacan u bixiyey awoowgii oo aad u jeclaa muddo 25 sannadood ka hor, balse meel kasta oo uu shaqo ka doonto waxa caqabad ku noqoty... Wiil uu dhalay Kim Jong-nam oo warbaahinta si dadban oo murugo leh ula hadlay (Sawirro) Muuqaal gaaban oo ay daabaceen warbaahinta waxaa kasoo dhex muuqday wiil uu dhalay Kim Jong-nam oo dhawaan lagu dilay madaarka Kualalampur dalka Malaysia, kasoo dilkiisa lagu eedeeyo waalaalkii oo ah hoggaamiyaha Kuuriyada-waqooyi.
Muuqaalka gaaban qofka kasoo muuqday wuxuu leeyahay, “Magacaygu waa Kim Han-sol, oo ah muwaaddin Kuuriyada-Qaqooyi u dhashay, kana mid... “Farmaajoow inaad i fogeynayso ayaan filayey” filan waagii ka dhacay Villa Somalia Arintan waayahan hadalheynteedda magaalalda aad ayuu ugu badan yahay, taasoo noqotay in sadexdii qof ee taaganba uu mid ka mid ah afka ku hayo.
Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay isbadal 8­dii bishii febraayo ee sanadkan 2017, taasoo aheyd in Maxamed C/llaahi Farmaajo uu noqday madaxweynaha Dalka Soomaaliya.
Horey waxaa u jirtay marka madaxweyne uu la wareego Madaxtooyada... Ogoow lacagta la siiyay gabadhii dishay Kim Jong-Nam oo ah walaalka hogaamiyaha North Korea Wararkii u dambeeyey ee ka soo baxaya dilkii ninkii ay walaalaha ahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi Kim Jong-Nam ee dhowaan ka dhacay gegida diyaaradaha magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Malaysiya, ayaa sheegaya in mid ka mid ah labada dumar ah ee loo haysto dilka ninkani ay qiratay in abaal marin ahaan loo siiyey $90 doolar oo keliya.
Gabadhan 25 jirka ah oo... Dagaalka Qabyaalad-diidka iyo Qabyaalad u doodka ee Baraha Bulshada (Qormo) Siyaasada Soomaaliya waa mid isbedal badan oo aan inta badan salka dhulka dhigin maadaama aysan jirin Xisbiyo lugu kala taageero aragtiyo ama fikir siyaasadeed ayaa waxaa kaalintaasi nus-qarnigii lasoo dhaafay buuxiyey Qabyaalada oo ah aalada Qawmiyada Soomaalida ka reebtay dunnida insteeda kale.
Tan iyo burburkii dowladihii Soomaaliya soo maray ee kala ahaa tii Shibilka... Xasan Sheekh ma isagaa dhulka is dhigay mise waa la dhigay? (Maqaal Xog Waran ah) Noloshu waa meerto maalmeed iyo milayo isku milan, haddana, kalana miiran. Waa facyaalo iyo fir kala falliirma, isuna fool iyo farsamo eg. Waa waayo waayeel u soo joogay dhallaanna u sii jeedo. Waa ayaamo ubadku aayeeysanayo, tawlkuna hore u soo arkay aynigooda.
Qof Kasta wuu dareemi karaa ujeedka hadalkaas maadaama XALAY ay aheyd habeen cusub oo usoo hoyatay Umadda Soomaaliyeed... Tiirarkii Shanta ahaa ee sababey in Farmaajo uu noqdo Madaxweyne kana guuleysto dhigiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo horay u soo noqday Ra’iisalwasaare ayaa ku guulaystay xalay madaxtinimada dalka Soomaaliya.
Madaxweyne... 6 Waxyaabood oo Sababtay Guuldarradii Xasan Sheekh Maxamuud (Warbixin buuxda) In badan oo ka mid ah dadka wax faaqida ma aamini karaan sida ay isu rogtay Doorashadii Madaxtinimada Somalia maanta, waxaa tartan adag laga filaayay hogaamiyaha laga adkaaday ee Xasan Shiikh Maxamuud.
Ilaa hada dadka ku haminaayay inuu Xasan soo laabto sharaxaad fiican kama bixin karaan sababtii uu Xasan ku guul dareystay ,laakiin waxaan qoraalkaan kusoo koobaya dhowr... Sababta Dadka Shiinuhu u jecelyihiin in ay cabaan biyaha kulul oo la ogaaday (Daraasad) Dadka badankooda ayaa jecel inay cabaan biyaha qabow marka ay harraadaan ama ay raashin cunayaan, laakiin bulshada Shiinuhu sidaasi ma samayso.
Waxay caado u leeyihiin inay cabaan biyaha kulul marka ay biyo u baahdaan iyo marka raashinkaba. Wargeyska Los Angles Time ayaa daabacay in dadka Shiinihu ay dhaleecyeen qofka ka tirsan qoyska ee caba biyaha qabow iyagoo aaminsan... “Murrashax khudbadiisa XIKMAD kama hagrado” W/Q: Yuusuf Garaad (Akhriso) Waxaan dhegeystay ku dhowaad dhammaan khudbadaha murashixiinta u soo istaagay Xilka Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay ka horjeediyeen fadhiga labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaa shir Guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Mudane Mudane Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari, iyada oo uu goobjoog yahay Guddoomiyaha Aqala Sare,... ‹123›» Go to DASHBOARD > Appearance > Menus to set up the menu.